Iyo Flat-Yakavharwa Retriever chaiye canine shamwari yako? - Inobereka
Iyo Flat-Yakavharwa Retriever chaiye canine shamwari yako?
Kunyangwe ivo vasina kufarirwa sehama dzavo dzeGoridhe, Flat-Coated Retrievers, inonziwo Flatties kana Flat-majasi , zvakakodzera kukosheswa uye kudiwa.
Nemaonero avo anofara uye anofarira-kufadza, ivo iguru shamwari yebhudhi kuva nayo!
Wagadzirira kusangana naPeter Pan we AKC's Sporting Boka ? Ramba uchipururudza uye uone kana iwe uchifanira kuwedzera iyi yekudzosa kuberekesa kuimba yako.
Ko Flat-Coated Retriever yakabva kupi?
Chii chinonzi Flat-Coated Retriever inotaridzika?
Temperament: Ko Flat-Yakapetwa Inotora yakanaka imbwa dzemhuri?
Nzira Yekutarisira Yako Flat-Yakavharwa Retriever
Flat-Coated Retriever Hutano
Yakawanda Sei Iyo Iyo Flat-Yakaputirwa Retriever Puppy Mutengo?
Flat-Yakavharwa Retriever Vs. Goridhe Retriever Vs. Labrador Retriever
Unoda kuziva nezve Flat-Coated Retriever Mixes?
Ndiani Anofanirwa Kuwana Flat-Coated Retriever imbwa?
Kamwe kudanwa Wavy-Yakaputirwa Kudzosa , Flat-Coats ndeimwe yeAmerican Kennel Club's (AKC) matanhatu emhando dzekudzosa uye ari magundogs eanobva mavambo.
Zvinonzi ivo vakatanga kuburitswa muBritain mukati mepakati pemakore ekuma1800 kuti vatore mutambo wepanyika nemvura.
Asi chero munhu anoda kudzoreredza aizoziva kuti pakutanga aishandiswa nevabati vehove kuvabatsira kutora zvinhu uye hove kubva mumvura, kunyanya kutenderera hove dzeNewfoundland.
Sezvo pfuti dzaikura nekukura zvakanyanya, vavhimi vaida canine iyo inogona kumaka shiri dzakadonha nekudzosera kwadziri pasina kukuvara.
Saka parutivi nekuve nemajini e Imbwa yeSt izvo zvinovaita zvisikwa zvinotora nemuromo wakapfava uye vasingashambadzi vanoshambira , idzi imbwa dzekuredza dzakayambuka nemhando dzekutanga dzeBritish dzakadai seanongedzera kuti aratidze shiri-yavo pfungwa zviri nani.
Pakupera kwema1800, rudzi rwacho rwakagadzirwa kubva pakuva nejasi rewavy raive risingadzore mvura zvakakwana kururamisa bvudzi.
Akasiyana collies, setter, spaniel-senge imbwa, hwai imbwa, uye Newfoundlands zvakaverengerwawo mumutsara weFlat Coat, ndosaka vakadaidzwa kuti 'mongrel' kwemakore mazhinji.
Flat-Coated Retrievers vaimbozivikanwa se 'Game Keeper's Imbwa' nekuda kweiyo chiChirungu gentry yakapararira kushandiswa kworudzi urwu munzvimbo dzavo dzakatetepa.
HR Cooke ndiye anonyanya kuzivikanwa mutariri weFlat-Coat. Akavachengeta kuRiverside Kennel kweanopfuura makore makumi manomwe! Ndipo panoberekerwa imbwa mune mibairo, mhando, uye nhamba zvakakunda muzviratidzo zvembwa uye zviitiko zvemumunda.
Kunakidza chokwadi : Iyo Flat-Coated Retrievers forebears 'zita rakavakirwa pahunhu hwavo - Old Bounce uye Mudiki Bounce . Muchengeti weGamhi J. Hull aive navo muna 1864, uye vaive nhengo dzebasa rake rekutora.
Ngatirege kukanganwa kupa mbiri kune SE Shirley . Akabatsira muforoma nekukudziridza Flat-Coats kuita yakagadzikana mhando.
Rimwe zita rinoda kuzivikanwa nderimwe remasimba makuru pane rudzi - Stanley O'Neill.
Akaratidza kuzvipira kwekuzvipira mukuvimbisa kuti Flatties yaive nerutsoka paakapa zano kuvatsva vatsva vezana ramakore rechi19 remhando chaiyo muchivakwa chemasheya.
Nehurombo, ivo vakarasa nzvimbo yavo yepamusoro yekuzivikanwa ne Goridhe Retriever uye Labrador retriever muna 1918. Pakazopera Hondo Yenyika II, vakapotsa vanyangarika apo kunyoresa kwakaderera kusvika pamwero une ngozi.
Kungotarisa fido iyi, zvinonzwisisika kuti vamwe vanogona sei kuvakanganisa sebrown kana nhema Goridhe Retriever , asi kungo gadzirisa zvinhu, HAPANA chinhu chakadai.
Sekureva kweAKC kubereka mureza , Purebred Flat-Coated Retrievers vane refu, rectangular inovaka ne silhouette iyo inoratidza kwavo kwakanaka uye kuonda kutaridzika , iyo inoonekwa muchimiro chavo uye ichivapa inoyerera, inoshanda, uye yekuvhara pasi gait.
Wanga uchiziva here kuti pane dudziro yechinyakare kwavari? I 'Simba risina matanda uye rusaruraganda pasina huswa.'
Flat-Coat zvakare ine yakareba kana 'chidimbu chimwe' musoro - chinhu chakasarudzika che retriever, kuratidza kwavo nemutsa uye akangwara kutaura .
Kuwedzera kune yavo inotapira, imbwa-imbwa-kumeso maziso eamondi akaita kunge bhuruu kana hazel uye zvidiki, zvakasikwa zvine floppy nzeve dzakakora minhenga.
Saizi: Yakakura sei Flat-Yakapetwa Retriever?
Flatties inogona kumira yakareba seRabhani, asi ivo vakaonda.
Flat-Coated Retrievers inogona kuyera kutenderera Makirogiramu makumi matanhatu kusvika makumi manomwe (27 kusvika 32 kg) uye mira pa 22 kusvika 24.5 inches (56 kusvika 62 cm) pa kunosvava , uko vanhukadzi padiki padiki pane varume.
Saka kana iwe uchigara mufurati uye uchifarira kuwana Flat-Coat, funga zvakare. Kunze kwekuve canine hombe, iyi pooch inoda nzvimbo yekumhanya nekutamba.
Muchokwadi, ivo vari inokodzera kugara-mudhorobha- kana kugara kwenyika .
Asi imba ine yadhi yakakura iyo ichapa imbwa iyi mukana wekutamba uye kutenderera kunze yakanaka, futi.
Iyo yakapetwa kaviri Flat Coat
Sembwa yeshiri, iyo Flattie rakakora jasi rehuremu hwakaenzana inoshanda zvakanyanya pasina kuwedzera huremu.
Kunge mamwe marudzi ane jasi rakapetwa, makushe awo anovadzivirira kubva kumvura inotonhora, kuranga zvivharo zvepasi, uye mamiriro ekunze akaomarara.
Bhachi ravo rinotaridzika zvakanaka harifanirwe kunge rakareba zvakawandisa, asi ivo vanowanzoita minhenga pachipfuva, nzeve, kumberi nekumashure kwemakumbo avo epamberi, pazvinhu zvavo, nepasi pemuswe.
Vanhurume vane jira rinorema uye rakareba rakakomberedza mutsipa wavo.
Wakamboona mumwe munhu achitengesa yero Flat-Coated Retriever? Kana hongu, saka unofanirwa kurega kubva kwavari. Rudzi urwu CHETE runouya neruvara runopenya rwechitema kana yakasimba chiropa (yakadzika yakatsvuka-brown mumvuri).
Flat Coats inotapira uye inofara, ichivaita mhuka dzakanaka kwazvo. Zvakadaro, tinoda kujekesa kuti hapana imbwa ndeye munhu wese.
Unoziva here kuti nei vakaiswa zita rekuti 'Peter Pan'? Imhaka yekuti vanokura zvishoma nezvishoma. Vamwe varidzi vanotopupura kuti kunyangwe sembwa dzakura, vanochengeta hunhu hwavo hwembwanana.
Kune mafeni eiyo Flat-Coated Retriever iyo ichawana hunhu uhwu hunofadza, nepo vamwe vachizoona kuti zvinogona kutsamwisa sei kutsungirira antics akadaro.
Tinokurudzira Flatties yemhuri dzinoshingaira dzine vana vakuru . Haingori pfungwa yakanaka kuve neanofara canine uyo anofungidzirwa semhare muswe-ngoro yekuve padhuze nevana vadiki uye vanhu vasina kusimba.
Asi nemuridzi akakodzera uye nemhuri, iyi pooch inodakadza, ine hushamwari, uye inoshivirira ichave shamwari yakanaka kune vanhu uye zviripo zvipfuyo zvemumba.
Kana uine imwe imbwa, usazvidya moyo. Nedzidzo yakakodzera uye kushamwaridzana kwekutanga, Flat Coats inonakidzwa nekambani yavo.
Izvi zvinogona kuve nhau dzakaipa kune dzimwe dzimba, nepo vamwe paw vabereki vanogona kunyatso kushivirira ichi quirk. Chero nzira, isu tinokurudzira rowdy uye inonakidza canine kumhuri dzine vana vakuru.
Iwe haungade yako Flattie yako kufara zvichikonzera nyaya, kana muswe wavo unogara uchidzungudza muswe uchigogodza pamusoro pevana vadiki uye vakwegura vasina simba, handiti?
Asi isu hatigone kupomera imbwa nekuda kwerudo rwavo rwekugadzirisa dzimba uye vasingazive simba ravo, saka chengeta izvi mupfungwa.
Ivo vane rudo uye vanodadira, uye vanofarira kuve pedyo nevanhu vavo. Uine kurovedza muviri kwakakodzera uye kudzidziswa, unogona kunzwa wakasununguka kuvasiya vega.
Zvisinei, ivo vanoshuva kushamwaridzana. Kuva neFlattie kushandisa yakawanda yenguva yavo vega kungave hutsinye.
Idzi imbwa dzakanaka rudzi rwekudyidzana uye hadzifanirwe kunyara kana kuita hukasha. Ivo vakanaka kwazvo nedzimwe imbwa, uye vanogona kugara nekatsi nedzimwe mhuka mumusha pasina nyaya.
Iyo Retriever inohukura kana ichinakidzwa asi isingazivikanwe serudzi rune ruzha. Ivo vanogona kuhukura kukuzivisa iwe nezve kuvapo kwekunze uye vanogona kudzivirira mhuri yavo, asi ivo havasi vanochengetedza imbwa.
Hunhu hwavo hwakapfava, hwekutengesa unovaita ivo vakanakisa kukwikwidza kumasaini canini.
Idzo imbwa dzakasimba dzinoshanda dzakagadzirirwa kuve nekutsungirira kwezuva rese rekuvhima. Kufamba-famba uchitenderedza chivharo hazvigoneke kugutsa yavo chikamu chezviitiko .
Ivo ndivo akakodzera shamwari yemuvhimi asi vanogona kugutsikana kwazvo mune inoshanda imba. Iwe uchaona zvakare kuti ivo vanogarawo vachikwira for a adventure uye vakanyanya musango mudiwa.
Iwe unozofara kuziva izvozvo kana zvasvika kune kudzidzira , Flat-Coated Retrievers inoteerera nekuti ivo vakangwara uye vanofadza vanhu .
Vachada kudzidziswa kwekudyidzana kuzere ne kukurudzira pfungwa . Kune vane ruzivo imbwa varidzi, tinogona kutaura kuti ivo vari zviri nyore kudzidzisa kunyangwe zvavo zvekuda.
Ive nekuchenjerera panguva yekudzidzira, zvakadaro. Flat-Coats anozoedza kushivirira kwako nekuda kwavo kwevanopokana antics, asi iwe unofanirwa kuziva kuti ivo vari zvakanyanya kunetseka canines.
Dzivisa kubata mwana wako nehasha nekuti zvinogona kutungamira mukuomesa musoro kana kusaremekedza zvachose.
Kunyangwe zvodii, namatira kune kunakidzwa nzira dzekudzidzisa izvo zvinoita kuti imbwa yako ibatanidzwe nepo ichisanganisira yakanaka yekusimbisa. Mhando dzese dzekudyira zvekudya, kurumbidza, uye kutamba zvinochengeta yako Flat-yakavharwa Retriever yakasimudzwa uye ne vachidzungudza muswe .
Mushure memakirasi ese embwa, kushamwaridzana kwekutanga, uye kudzidziswa kwekuteerera, unogona kutarisira Flat-Coated Retriever kuti ishandire sembwa dzekurapa.
Iwe unogona zvakare kumuita ajoine dzakasiyana canine mitambo senge rally, kuteedzera, kukwikwidza kwepamusoro-soro makwikwi, uye kunyangwe dock-diving .
Wanga uchiziva here kuti Flat-Coated Retrievers inonyanya kunetseka pakupisa nekuda kwechiropa chavo kana nhema nhema.
Kunyangwe ichingodziya, iyi pooch inogona kupisa nekukurumidza, zvinova zvimwe zvezvikonzero zvekuti haufanire kusiya Flattie yako kuti igare kana kugara kunze kwenguva refu.
Tarisa uone chero zviratidzo zvekupisa seyako Flat-Bhachi haazive kana ari kunyanya kupisa kana achitamba panze.
Saka chii chimwe chaunofanirwa kunetsekana nacho kana uchiitira izvi imbwa yekuvhima ?
Kushambidzika: Ko Flat-Yakafukidzwa Retriever Shed?
Ehe, vanodaro. Flat-Coats ari vaiona sevanhu vairema , kunyanya kana mwaka iri kuchinja. Kwete kunze kwekunge uine allergies, usaore moyo. Unotenda kana kwete, iri bvudzi rerudzi iri nyore nyore kuchengetedza.
Flat-Yakavharwa Retrievers zvinoda kukwesha vhiki nevhiki kubvisa bvudzi rakasununguka kana rakafa, tsvina, uye kugovera mafuta echisikigo eganda.
Asi panguva yekudonha uye chitubu, iwe ungangoda kukwesha bhachi rako re canine shamwari zuva rega rega kuti udzikise huwandu hwehuswa hwakakomberedza imba yako nemidziyo.
Mabhati akakosha mushure mekunge Flattie yako yatamba mune madhaka madhaka kana kana iye akatora kushambira pagungwa, gungwa, kana dziva rine chlorini. Zvimwe kunze kwaizvozvo, mugeze chete pazvinenge zvakakodzera .
Dzimwe nzira dzekushambidzika dzakanaka, senge kuchenesa kwevhiki kwega kwe nzeve kudzivirira uye kutarisa hutachiona uye kucheka kwembambo kamwe kana kaviri pamwedzi.
Ita kuti ive yekukwesha mazino echipfuwo chako kanenge kaviri kana katatu pasvondo kudzivirira chirwere chemazino, tartar buildup, uye mweya wetsvina.
Kushandisa Yako Flat-Yakafukidzwa Retriever
An imbwa inoshanda zvinodiwa zvakawanda zvekurovedza muviri uye kukurudzira pfungwa. Iyo yakanaka nzvimbo inogona kunge iri nzvimbo yakachengeteka kuti vamhanye vakatenderedza off-leash.
Ivo shamwari dzakanaka dzekukwira, uye kukwira kwakanyanya kunakidza uye kunonetsa kupfuura kufamba munharaunda.
Vazhinji Flatties vanonakidzwa nemutambo wekutora, uyo unogona kuve unowedzera kuwedzera kune yavo yekurovedza hutongi. Ichokwadi imbwa dzemvura uye vangade kuwana rukova kana dziva kwavanogona kushambira.
Mbwanana nembwa diki hadzifanirwe kumhanya; zvinogona kuomarara pamajoini avo. Kana vangove vakuru, ivo vanomhanya kwazvo uye vanomhanya navo.
Kudyisa Yako Flat-Yakafukidzwa Retriever
Flat-Coated Retrievers haina chero mhando-dzakananga zvinovaka muviri zvinodiwa kana zvinonetsa. Iyi high-energy canine inoda chikafu chemhando yepamusoro nemaprotein akakwana uye nemafuta kuti ivachengetedze vachishanda uye vakagwinya.
Kazhinji, iko kubereka hakuna zvakawanda matambudziko ehutano , asi Flat-Coated Retrievers vane nzira inoparadza yekenza.
Kunyangwe paine pasati pave nekuongororwa kwemajini kuti uzive kana imbwa yega iri panjodzi, vafudzi vane mukurumbira vari kushanda nesimba kusarudza magineti ane hutano, akareba-refu kuti vaenderere mberi nemitsetse yavo.
Vafudzi vane mutoro vanozoongorora yavo inogona kubereka stock vasati vafunga nezve pairing. Iyo zvido zvekuyedza yeFlat-Coated Retrievers inosanganisira:
Kuongorora kwemaziso neBhodi-Certified Veterinary Ophthalmologist kuongorora Glaucoma , PRA, uye Cataract
Patellar bvunzo nachiremba wemhuka kuti aone Patellar Luxation
Hip radiographs yekuratidzira Hip Dysplasia
Kana bvunzo dzese dzakurudzirwa dzapera uye dzaendeswa, imbwa yako ichagamuchira nhamba yeCIC.
Kana uchitsvaga wekubereka kuitira ramangwana rako Flat-Yakavharwa Retriever puppy , iwe unogona kutarisa kuti uone kuti imbwa dzadzo dzinenge dzaitwa kuyedzwa uye tarisa mhedzisiro .
Glaucoma inoitika kana kumanikidza mukati meiyo yeziso kuri pamusoro peyakajairwa. Glaucoma inogona kurwadza, uye hapana mushonga unoshanda. Mhedzisiro yacho kazhinji ibofu rakazara.
Flat-Coated Retrievers vane mukana wekugara nhaka yekutanga Glaucoma. Pane fungidziro yekuti ichabata imwe ye100 Flat-Coats.
Mune nhaka yekutanga Glaucoma, iko kutadziswa kune kwakakodzera kwemvura kunodonhedza kunoguma kubva mukukanganisa kwakashata kweiyo pectinate ligament.
Iri ligament rinofanira kubvumidza kuyerera kubuda kubva kune yepamberi ziso mukamuri. Nyanzvi dzinodaidza pectinate ligament isina kuvandudza 'pectinate ligament dysplasia' kana PLD.
Iwe unogona kuona izvi zvisina kujairika kuburikidza nebhodhi-rakasimbiswa veterinary ophthalmologist pasati paine chero zvimwe zvekurapa zviratidzo zveGlaucoma. Ruzivo urwu runogona kubatsira uyo anounza mhuka kuita sarudzo dzakaringana pakuronga marara.
Kufambira mberi Retinal Atrophy (PRA)
PRA inzvimbo inogarwa inogona kutungamira kuhupofu. Kazhinji muFlat-Coats, fungidziro ndeyekuti inogona kukanganisa ingangoita 1% yerudzi. Panguva ino, hapana bvunzo yekuzvarwa yePRA muFlat-Coats.
Makaraketi ari opacity mukati memeso eziso. Flat-Coats akajairwa kubarwa nhaka cataract. Kuongororwa nenyanzvi kunogona kuona kana imbwa iine cataract uye kuti ndeye rudzi rwenhaka here kana kuti kwete.
Entropion uye Ectropian
Munguva yekuongorora kweziso, nyanzvi ichaonawo kana iyo Flat-Bhachi ingave entropic kana ectropic. Entropion maziso eyelids anotendeuka mukati; izvi zvinogona kukonzera abrasions sezvo eyelashes ikozvino yava kukwiza kumeso.
Ectropion ndeemaziso anotendeuka, achiisa maziso panjodzi sezvo asina kudzivirirwa. Imbwa ine entropion kana ectropion inoda kugadziriswa kwekuvhiya.
Mune patellar luxation, iyo patellas , kana kneecap, luxates kana pops kunze kwenzvimbo. MaVets anofanirwa kuongorora ingangoita imbwa dzinoberekesa uye oadzichenesa kubva kune chero hupfumi usati waita sarudzo.
Iko bvunzo iko kumanikidza kwepanyama kwepatella. Imbwa yakamuka, uye bvunzo haina kurwadza.
Iko kubatana kwehudyu nekukura zvisina kujairika, zvichikonzera kukodzera kusiri pakati pebhora rehudyu nehomwe yekubatana. Shwashwa ichatsemuka nekufamba kwenguva, uye arthritis ichawedzera.
Iyo imbwa ichave ichirwadziwa uye iine yakaganhurirwa renji yekufamba. Zvingave zvakanaka kana iwe ukaongorora dzinogona kubereka imbwa padambudziko iri usati waita chero sarudzo.
Mhuka dzinovhara imbwa ne x-ray. Zvisinei, imbwa dzine hudyu dysplasia inogona kusaratidza chero zviratidzo vachiri vadiki. Radiographs anotendera nyanzvi kuongorora kukura kwehudyu uye kuumbwa.
Chiitiko checancer mu Flat-Yakavharwa Retrievers yakakwirira kana ichienzaniswa nemamwe marudzi.
Imwe yenguva refu inomhanya Cambridge University kudzidza yakaratidza kuti hafu yezvose Flat-Coats ichaonekwa iine kenza pazera remakore masere.
Kunyangwe paine zvisati zvave bvunzo kana kuongororwa izvo zvinobvumidza muberekesi kuziva kuti imbwa ipi ingangodaro yawana kenza, pane zvinoitika mukati memitsara yemhuri.
Hazvina kujairika mumarudzi mazhinji, Yakashata Histiocytosis inomiririrwa pamusoro Flat-Yakavharwa Retrievers .
Iyo kenza ine hukasha iyo inosanganisira kusanganisa kuunganidzwa kwe histiocytes (rudzi rwechena reropa). Izvo zvakajairika kuti ikanganisa masayiti akawanda panguva imwe chete.
Zviratidzo zvinosanganisira kudya kwakashata, kuonda, uye kuneta. Ichi kenza ine hukasha inowanzo guma nerufu mukati memavhiki kana mwedzi.
Lymphosarcoma (kana Lymphoma) chirwere checancer chema lymphocyte (rudzi rwechena ropa reropa iro rinotangira mune lymph node uye mapfupa emongo).
Gomarara iri rinokwanisa kupararira nemuviri wese. Chiratidzo chinowanzozivikanwa chekiriniki ndiko kuwedzera kwema lymph node.
Pasina kurapwa, imbwa dzichararama avhareji yemazuva makumi matatu. Nekurapa, yako canine inogona kuwana kuregererwa inosvika makore maviri. Kupona kupfuura makore maviri hazvigoneke, kunyangwe nekurapwa.
Hemangiosarcoma ibundu rakaipa rinobva mumitsipa yeropa. Nzvimbo inonyanya kuitika yechiitiko ndiyo spleen.
Aya mamota ane metastatic (akajairwa kupararira). Imbwa dzakabatwa dzinogona kuwedzera mamwe mamota mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kuongororwa. Iyo yakajairika nzvimbo metastasized kune iyo uropi.
Kurapa kunogona kusanganisira kubviswa kwekuvhiya kwetumarara, kana zvichibvira, kuchiteverwa nekemotherapy. Kufungidzira kwenguva refu kwakashata.
Kunyangwe neese aripo ekurapa sarudzo, isingasviki gumi muzana yembwa dzichapona gore kana kupfuura.
Osteosarcoma ndiyo inonyanya kufadza bundu bundu mune imbwa. Zviratidzo zvekutanga zvekurapa zvinogona kunge zvichiremara.
Kana zvasvika pakurapwa kwakajairwa, zvinogona kusanganisira kudimburwa kwegumbo rakabatwa. Chemotherapy inogona kutanga mushure mekuvhiyiwa.
Kufungidzira kuri nani kushandisa musanganiswa wekuvhiya uye chemotherapy. Kana gomarara ratopararira kumapapu, fungidziro yacho ichave yakaipa.
Dzimwe Hutano Hutano
Gastric Dilatation Volvulus ( Bloat )
Gastric dilatation-volvulus (GDV) inotyisa inotyisa. Kutanga iko kuunganidzwa kwemhepo mudumbu, izvo zvinoita kuti dumbu rizvimbe. Imbwa iri panjodzi yekufambira mberi kuenda mudumbu rakatenderedzwa, inonzi torsion.
Imbwa hombe-dzinobereka dzine dzakadzika, dzakamanikana chipfuva (senge Flat-Coated Retrievers) vari pangozi yakanyanya. Iyi ficha ndeye chaiyo yekurapa emergency, uye nguva yakakosha.
Kunyangwe nekurapwa nekukurumidza, huwandu hwekufa kwe bloat ichiri chingangoita makumi matatu muzana.
Flat-Coats ari pangozi yakakura yepuraimari kana idiopathic pfari . Iko hakuna genetiki bvunzo ye pfari. Dzakawanda imbwa dzakabatwa dzinogona kutarisirwa zvakanaka uye kurarama hupenyu hwakajairika.
Hupenyu hunotarisirwa hweFlat-Coated Retriever makore masere kusvika gumi. Izvi zvakaderera-kupfuura- avhareji yehupenyu imhedzisiro yezviitiko zvakakwirira zvegomarara murudzi.
Yakagara-refu Flat-Bhachi hazviwanzoitika kuti parizvino pane chidzidzo chinotarisa chero Flattie inopfuura makore gumi nerimwe ekuberekwa.
Kana iwe uchinzwa kunge wagadzirira kutenga Flat-Yakaputirwa Retriever puppy , iyo avhareji mutengo uri kutenderedza $ 1,200 . Asi kana iwe uchida imwe kubva kumakwikwi emitsara kana yepamusoro pedigree, tarisira kuti mutengo utange pa $ 1,700.
Mari yacho inoenderana nezvinhu zvakasiyana senzvimbo inowanikwa mubereki uye mukurumbira, dzinza, uye vana vanowanikwa.
Hapana munhu anoda kubhadhara izvi zvakawanda uye kungoora mwoyo nekuunza kumba imbwa isina hutano. Kuti udzivise kushungurudzika, chenjera pakutenga mbwanana kubva kuzvitoro zvezvipfuyo, zvigayo zvembwanana, uye vafudzi vekumashure.
Tarisa vatengesi vembwanana vane mutoro vanogara ne Flat-Yakavharwa Retriever Society yeAmerica (FCRSA) kodhi yetsika , edza yavo yekudyara stock kuti uve nechokwadi chekuti hachina hutachiona hutachiona huchaendeswa kune iyo marara uye inopa zvese zvakakosha zvinyorwa zvine chekuita nevabereki uye mwana wembwa wauri kutarisira kutenga.
Iwe unofanirwa zvakare kugadzirira a remibvunzo kuti iwe unogona kukurukura nemuberekesi usati wasaina chero chibvumirano .
Flat-Yakavharwa Retriever Vafudzi
Zviri nyore chaizvo kuwana Flat-Coated Retriever puru dziri kutengeswa pamhepo, asi zviri nani kuti utange nerudzi kirabhu yenyika uye iyo AKC Musika .
Asi isu zvakare takaedza kutsvaga mamwe makennels anopa akanaka Flattie vana kuti iwe utarise:
Rusununguko Rakafukidzwa-Rakafukidzwa Kudzorera (South Carolina)
Mudyi wenhaka Kennels (Mutsvene Joseph, MN)
Ipa Kennel (Makomo eBlue Ridge)
Kana iwe uri kunyanya paFacebook, tarisa Maodzanyemba Ekuchamhembe Flat-Coated Retrievers 'peji . Vakabereka Flattie iyo yakakunda Best of Breed muWestminster 2020.
Kununura iyo Flat Coated Retriever imbwa
Uye zvechokwadi, isu tinokurudzira zvikuru kutora Flat-Coated Retriever. Kune zvikonzero zvakawanda nei imbwa dzinopedzisira dzave munzvimbo dzekugara, asi kazhinji imhaka yekuti varidzi vekare havazive zvavari kuzvipinza mazviri.
Kunze kwekuchengetedza hupenyu hwengirozi, iwe zvakare unokwanisa kusevha madhora mashoma nekuti mutengo wekutora wakachipa - madhora mazana matatu . Iyi sarudzo zvakare yakakwana kune avo vasingade mbwanana zvakare.
Imbwa dzakura kubva kunzvimbo dzekununura dzakatodzidziswa imba, uye iwe unogona nyore kuziva nezve hutano hwavo uye hunhu.
Kana iwe uchida kununura Flat-Bhachi , imwe retriever, kana kunyangwe Flattie yakavhenganiswa rudzi, tarisa aya mawebhusaiti:
Fetchin 'Inotora Kununura (Los Angeles, CA)
Retriever Kununura kweColorado (Yakagara iri green, CO)
Flatcoated Retriever Sosaiti
Kununura Nzvimbo inokubvumira kusarudza nyika yako mukati meUnited States kuti udzikise kutsvaga kwako kweFlat-Coated Retrievers kuti iite.
Vazhinji vanodzosa vangangodaro vakagovana tateguru mumwe mu Tweed Mvura Spaniel . Nhasi, iyo Flat-Bhachi , Labrador, uye Goridhe marudzi akasiyana.
Flat-Yakavharwa Retrievers uya chiropa uye nhema, ne Vanodzosera Goridhe mune dzakasiyana mumvuri yegoridhe, kubva padyo-chena kusvika pakadzika tsvuku. Labrador inotora inowanikwa mutema, yero, uye chokoreti.
Iyo Flat-Yakavharwa Retriever imbwa yakareruka kupfuura iyo Goridhe kana Labrador retriever . Kureba kwakafanana kune vese vatatu.
Jasi reFlattie rakarara pamiviri yavo, nepo iyo Goridhe iine wavy fur ine yakawanda undercoat, uye iyo Labrador idiki-yakaputirwa rudzi.
Musoro weFlat-Coat wakanyanya kucheneswa uye wakamanikana kupfuura dehenya rakafara reGoridhe kana reRabhani.
Vese vatatu imbha dzinotengesa dzine yakafanana mwero wesimba . Ivo vane mukurumbira nekuda kwavo vana, vanoita zvipfuyo zvemhuri zvakakura, uye vane simba shamwari.
Vese vane mukurumbira wekugona kwavo kushanda, kunyange hazvo akawanda maGolden Retrievers ari mhuka dzinovaraidza kupfuura imbwa dzekuvhima mazuva ano.
Pakave nekumwe kusanganisa kwemaune kwakagadzirwa uchishandisa iyo Flat-Coated Retriever.
Chatham Chikomo Retriever
Iyo yakasimba kwazvo Chatham Hill Retriever - Mufananidzo sosi
Iyo Chatham Hill Retriever musanganiswa we Flat-Bhachi uye Cocker Spaniel . Kunyangwe iyo Cocker Spaniel ane nhaka se gundog , kashoma kuvhima nhasi. Iyo Chatham Hill Retriever ingangodaro isingabudirire pabasa.
Iyo dense, yakawanda jasi reCocker Spaniel zvakasiyana zvakanyanya kupfuura zvine mwero Flattie jasi. Iyo Chatham Hill Retriever inogona kupedzisira iine yakawanda yakawanda furhu, inoda kuwedzeredza kushambidzika.
Ose ari Flat-Bhachi uye iyo Cocker mhando dzakakura dzesimba. Iyo Chatham Hill Retriever ingangoda yakakosha kurovedza muviri.
Nzvimbo-Flat ( Flat-Yakavharwa Retriever Mufudzi weAustralia Mix)
Sangana neinoshamisa Flat-Coated Retriever yeAustralia Mufudzi musanganiswa imbwa - Mufananidzo sosi
Iyo Aussie-Flat musanganiswa pakati pe Flat-Bhachi uye Mufudzi weAustralia. Chinangwa ndechekugadzira iyo inotungamira imbwa mumiriri.
Panguva ino, hapana anotungamira imbwa zvirongwa zviri kushanda nemusanganiswa uyu.
Iyo dense, jasi rakapetwa reAustralia Mufudzi rakanyanya kuwanda kupfuura bhachi rimwe chete raFlattie. Iko kusanganisa kunoguma kunogona kupedzisira nejasi rakakura rinoda kushambidzika kwakati.
Ose ari maviri marudzi aya ane yakakwira huwandu hwesimba. IAussie-Flat ingangoda kurovedza muviri kwakanyanya.
Iyo Flat-Yakavharwa Retriever inoshamisa, inotapira, imbwa yakangwara. Ivo vanonamata vana uye imbwa dzemhuri dzakanaka. Ivo vane shungu dzekukubatana newe pane chero chiitiko uye vanogona vachiri kukunda pane yavo yekutanga gundog chinangwa.
Jasi ravo rakadzikama kugadzirisa uye rinokwanisika kumba. Ivo vane simba rakakura uye vanoda kurovedza muviri zuva nezuva, asi vanodzidziswa uye vanotengesa mari.
Vakaberekerwa kutsungirira, havazofare nekufamba-famba kutenderedza chivharo manheru ega ega. Yakagadzirirwa kushanda pamwe nevanhu vavo, ivo havangabudirire kuva vega nguva zhinji.
Ivo vanogonesa pamitambo yakawanda uye zviitiko uye vanogona kuve yakanaka yekutanga show kana mutambo imbwa. Neyakakodzera kurovedza muviri uye kurovedzwa, vanogona kuve imbwa inoshamisa kune yekutanga-nguva muridzi.
Iwe une Flat-Yakavharwa Retriever? Kana iwe urikufunga kuva neumwe kubatana nemhuri yako? Tinoda kuda kunzwa kubva kwauri.
maltese/poodle (miniature) musanganiswa
imbwa yangu inoramba ichigumha gumha
akanaka mazita embwa yemukomana
mazita embwa dzepamusoro dzevarume